Ukukhula kwe-371% VS 70% Ukuhla! Ngaba uKhuphiswano lweMarike yeBathroom yonke lufikelele kwiNqanaba elithi “White Hot”? -IFaucets zeKhitshi eziBalaseleyo ngo-2021 | IiFaucethi zeBathroom ezigqibeleleyo | WOWOW iiFaucets
Ikhaya / Blog / Ukukhula kwe-371% VS 70% Yehla! Ngaba uKhuphiswano lweNtengiso lweGumbi lokuhlambela lufikelele kwinqanaba le "White Hot"?
2021 / 09 / 13 uhleloBlog 1654 0
IKhitshi yoqobo kunye neentloko zegumbi lokuhlambela
Kutshanje, iinkampani ezimbini ezinxulumene nendawo yonke yokuhlambela (ekwabizwa ngokuba yigumbi lokuhlambela lonke okanye igumbi lokuhlambela elihlanganisiweyo) -Igumbi lokuhlambela laseHuida kunye neSeagull Sumitomo bakhuphe iziphumo zabo zamva nje zemali. Ngokulandelelana bachaza idatha yengeniso yodidi kwisiqingatha sokuqala sika-2021. Ingeniso ye-Huida yococeko kwindawo yokugcina indlu yangasese inyuke nge-370.95%, ngelixa ingeniso ye-Seagull Sumitomo yeemveliso ezifanayo zehle ngama-69.63%. Amanye amaziko aqikelela ukuba ngo-2025 ubungakanani beemarike zangasese ziya kufikelela kwi-16.5 yezigidigidi ze-yuan. Ukwanda okuqhubekayo kweemarike kuye kwatsala iinkampani ezininzi kunye nenkunzi yokungena. Idatha eyahlukeneyo yengeniso yeshishini inokuba luphawu lwalo lonke ukhuphiswano lwentengiso kwigumbi lokuhlambela elingene kwinqanaba elishushu.
Ingeniso yeHuida iyonke inyuswe kakhulu ngama-370.95%
Ngokwengxelo ka-Huida yokuhlambela ekhutshiweyo yonyaka, inkampani ifumene ingeniso yokusebenza ye-1.743 yezigidigidi ze-yuan kwisiqingatha sokuqala sonyaka, ukonyuka kwe-32.38%. Phakathi kwabo, yonke ingeniso yokusebenza kwegumbi lokuhlambela ibiyi-55 yezigidi ze-yuan, ukonyuka okubonakalayo kwe-370.95% ngexesha elifanayo kunyaka ophelileyo, ukubalwa kwe-3.18% yengeniso iyonke. Ukongeza, njengejelo lokuthengisa elibalulekileyo lokuxhasa ishishini lokuhlambela lonke, igumbi lokuhlambela laseHuida kwisiqingatha sokuqala sengeniso yeprojekthi yafikelela kwi-yuan engama-421 yezigidi, ukonyuka ngama-23.52%.
Icandelo: yuan yesigidi
Iindidi Product Ingeniso evela kushishino oluphambili ngexesha lokunika ingxelo Utshintsho lonyaka nonyaka Ipesenti yengeniso yeshishini
Iiceramics ezicocekileyo 89, 577. 08 23% 51%
Phakathi kwabo: izinto ezicocekileyo zococeko 18,873. 43 102.24 10%
Izinto zokugcina ucoceko ngokubanzi 5, 489. 53 370.95% 3%
igumbi lokuhlambela 6, 233. 47 57% 3.61%
Ikhabhathi yegumbi lokuhlambela 13,097. 35 4 & 86% 7%
Isixhobo sococeko sococeko 29,105. 53 39% 16%
abanye 11,164.69 21.28% 6%
Ingeniso iyonke evela kushishino oluphambili 172,851.19 32% 100.00%
Igumbi lokuhlambela laseHuida likhule ngaphezulu kwama-370% kwisiqingatha sokuqala sengeniso iyonke
Kujikeleze igumbi lokuhlambela lonke, uHuida kutshanje ubenezinto ezininzi ezibalulekileyo. Ngengokuhlwa ka-Agasti 3, igumbi lokuhlambela laseHuida labhengeza ukuba inyusa imali yokuphakamisa imali engeyiyo ngaphezulu kwe-200 yezigidi zeerandi kwisiXeko saseBeiliu, iShengda New Materials Co emva konyuso lwenkunzi, ebambe engekho ngaphantsi kwe-70% ye-equity entsha Shengda. Utyalomali lokuhlambela i-Huida kule meko ngokucacileyo ayisiyiyo kuphela yokuphucula imveliso yeethayile. Iimveliso zangasese zeHuida zibandakanya iinkqubo zethayile kunye neenkqubo zeSMC, kwaye ukusetyenziswa kweendawo zokuhlambela kwiphaneli yamatye kuyanda. Emva kokonyuka kwemali eyinkunzi, ibambe kungekho ngaphantsi kwe-70% yesabelo kwi-Shengda entsha. Utyalomali lokuhlambela i-Huida kule meko ngokucacileyo ayisiyiyo kuphela yokuphucula imveliso yeethayile. Iimveliso zangasese zeHuida zibandakanya iinkqubo zethayile kunye neenkqubo zeSMC, kwaye ukusetyenziswa kweendawo zokuhlambela kwiphaneli yamatye kuyanda. Ukonyuka kwemali eyinkunzi ngokucacileyo kuyahambelana nokuphuculwa kwegumbi lokuhlambela likaHuida kwinqanaba lesicwangciso sokuhlambela.
Ingcamango kaHuida igumbi lokuhlambela elipheleleyo
Ukusuka kwitshaneli, ngokweendaba ezikhutshwe yiHuida igumbi lokuhlambela nge-25 ka-Agasti, inkampani isandula ukuphumelela ibhidi "Iqela leLake Lake e-2021 - 2023 ngonyaka isithsaba kwigumbi lokuhlala le-SMC yonke iprojekthi yokuqokelela indawo yokuhlambela". Ingxelo iyabandakanyeka kwiprojekthi yophuhliso lwezindlu kwinkampani eqeshisa izindlu nomhlaba. Ukongeza kwigumbi lokuhlala laseLonghuguan, uHuida kutshanje ebemiswe kwisiseko sezindiza eSichuan, kwikhaya lomakhi weXiongan, kwigumbi laseShijiazhuang Huangzhuang kunye nezinye iiprojekthi ezibalulekileyo. Ukongeza kwigumbi lokuhlala laseLonghuguan, uHuida kutshanje ebemiswe kwisiseko sezindiza eSichuan, kwikhaya lomakhi weXiongan, kwigumbi laseShijiazhuang Huangzhuang kunye nezinye iiprojekthi ezibalulekileyo. Uyilo lwesitayile olujikeleze igumbi lokuhlambela lonke lwenziwa ngempumelelo.
Isaziso esidlangalaleni sokuphumelela kwigumbi lokuhlambela laseHuida
Ingeniso yeSeagull Sumitomo yeemveliso ezifanayo "ukuncipha" phantse ama-70%
Kwelinye icala, i-Seagull Sumitomo ikhuphe ingxelo yayo yonyaka ngokuhlwa kwinyanga ye-24 ka-Agasti. Ngokwengxelo, isiqingatha sokuqala seSeagull Sumitomo sifezekise ukusebenza kwemali eyi-1.983 yeebhiliyoni zeerandi, ukonyuka ngama-50.17%. Phakathi kwabo, yonke ingeniso yecandelo lokuhlambela yayiyi-0.26 yezigidigidi ze-yuan, ukwehla kwe-69.63% kwithuba elifanayo kunyaka ophelileyo, kubalwa kuphela i-1.31% yengeniso iyonke kwisiqingatha sokuqala.
Ixesha lokunika ingxelo langoku Ixesha elifanayo lonyaka odlulileyo Ukonyuka okanye ukuncipha konyaka
isixa Isabelo sengeniso yokusebenza isixa Isabelo sengeniso yokusebenza
Iimveliso zeHadesi zeHadesi 1,224,449,250.90 61.74% 852,088,803 」7 64.53% 43.70%
Iimveliso ezikrelekrele zasekhaya 82,137,189.36 4.14% 48,495,995.33 3.67% 69.37%
Iimveliso yodongwe Bath 105,274,145.70 5.31% 69,475,496.35 5.26% 51.53%
Gcwalisa igumbi lokuhlambela 26,034,399.59 1.31% 85,713,709.96 6.49% -69.63%
Iikhabhathi ngentando yakho 131,197,274.24 6.62% 97,494,226.96 7.38% 34.57%
abanye 41,096,667.64 2.07% 33,121,472.05 2.51% 24.08%
Lwasekhaya 768,858,462.30 38.77% 549,233,106.69 41.59% 39.99%
Ngaphandle 1,214,286,582.34 61.23% 771,337,728.87 58.41% 57.43%
I-Seagull Sumitomo yawa phantse ngama-70% kwisiqingatha sokuqala sengeniso yonke yokuhlambela
Uyilo olusebenzayo lwendawo yonke yokuhlambela i-Seagull kule minyaka idlulileyo, ukwehla kwengeniso kudidi kwakungalindelekanga. Iyaqondakala into yokuba iSeagull Sumitomo yaqala ukubandakanya yonke ingeniso yecandelo lokuhlambela kwingxelo yezemali ngo-2018. Kwiminyaka emithathu ukusuka kwi-2018 ukuya kwi-2020, ingeniso yecandelo yayiyi-0.68 yezigidigidi ze-yuan, i-183 yezigidi ze-yuan kunye ne-203 yezigidi ze-yuan, ngokulandelelana, ukwanda kwe-100%, 170.22% kunye ne-11.02%. Kwisiqingatha sokuqala se-2019, kukho ukonyuka kwe-382.51%. Ukongeza, lonke udidi lwendawo yokuhlambela lwenza i-3.05% yengeniso iyonke ngo-2018, ukuya kwi-6.09% ngo-2020.
(Ngokusekwe kwingxelo yemali yeSeagull Sumitomo)
Ukuqala kwisiqingatha sokuqala se-2020, ingeniso yeSeagull Sumitomo kudidi lokuhlambela lonke yehlile, yehla nge-7.91% ngeli xesha langoku. Kwisiqingatha sokuqala salo nyaka, iqhubekile nokwehla kwayo, ngengeniso yehle ngama-69.63% kunye ne-1.31% yengeniso iyonke. Kodwa uSeagull Sumitomo khange achaze izizathu zokuhla kwengeniso kolu luhlu.
Iimveliso zaselwandle zaselwandle
Iyaqondakala into yokuba iSeagull Sumitomo yaqala amalungiselelo ngo-2015 ukungena ebaleni lokuhlambela. Ishishini okwangoku lineempawu ezinje ngeNestle kunye neFrontier, kunye neQingdao, iSuzhou, iZhuhai, iJiaxing kunye nenani leziseko zokwenza izinto ezikrelekrele. Kwiminyaka yakutshanje, ikwafumene iinkampani ezinje ngeJacopolo, iGuangdong Nestle, iSeagull Champion kunye neDatong Nai ukomeleza ishishini lokufaka lonke. I-seagull Sumitomo ithe kwingxelo iya komeleza izindlu zangasese ezipheleleyo kwixesha elizayo ukuhlangabezana neemfuno zokwenza ngokwezifiso indawo yokuhlambela yonke. Izokwandisa ishishini layo liye kwiindawo zokuhlala, kwi-ToC, e-EPC nakwiiofisi zorhwebo.
Ubungakanani bemakethi buza kufikelela kwi-16.5 yeebhiliyoni ze-yuan, kwaye ukhuphiswano luya lusiba mandundu
Elinye icala likhule nge-370.95% kwaye elinye icala lehle ngama-69.63%. Oku kunokuba ngenxa yomahluko ngexesha lokungena kunye nemowudi yophuhliso kunye nesiseko sophuhliso lweenkampani ezahlukeneyo, kodwa ikwabonisa ukhuphiswano olunamandla kwishishini. Ngokwe-Guangdong yePhondo yeZakhiwo zoShishino lweZakhiwo zoMbutho weZakhiwo zisandula ukukhupha "iphepha elimhlophe lokuphuhliswa kwendlu yangasese ye-2021", kulindeleke ukuba ngo-2018-2025, eyona ndawo iphambili yokuthengisa kwigumbi lokuhlambela (ihotele / indawo yokuhlala / indawo yokuhlala) iya kwanda ukusuka kwi-1.6 yezigidigidi ze-yuan ukuya kwi-16.5 yezigidi zeerandi, kunye nenqanaba lokukhula ngonyaka le-39.6%.
Ngaphantsi kokwandiswa kwemarike, iinkampani ezininzi zikhawulezise isantya sokungena. Ngo-Meyi walo nyaka, Panasonic iboniswe e-Shanghai Kitchen & Sanitary Show ukwenza yonke imveliso yokuhlambela ngokusebenzisana noWishi Sumitomo, kulandele ukukhutshwa kweendawo ezintlanu eziphambili, kubandakanya igumbi lokuhlambela lonke. Nge-Agasti yalo nyaka, Indlu yangasese ye-Hai Li lamkele abathunywa abasuka eNew City Holdings, bebonakalisa intsebenziswano entle phakathi kwezi nkampani zimbini. Kuxelwe ukuba okwangoku, yonke imveliso yokuhlambela yaseHaili ibimiswe kwiiprojekthi ezininzi zeBoutique zeNew City Holdings ezinje ngeXi'an Fengshi Joy Mansion. Umlawuli weCandelo loCoceko Ishishini lofakelo liphela likwakhula ngokukhawuleza. Ukongeza kwintsebenziswano enzulu kunye nePropathi yase-United States, ikwafikelele kubambiswano olunobuchule kunye neenkampani ezingaphezulu kwama-20 ezizezokwenyani ezifana ne-Evergrande, iPoly, iVanke, iBeyoncé kunye neZhonghai.
Izithuba ezintlanu eziphambili ezikhutshwe yiPanasonic zibandakanya indawo yonke yokuhlambela
Umbono wandiswa kuyo yonke indibano. Iinkampani ezininzi zisandula ukukhuphisana nolwakhiwo ngokufumana kunye nentsebenziswano- Umfumani weShell uzimisele ukuchitha i-yuan eyi-8 yezigidigidi ukufumana i-100% yolingano lwe-Shengdu Home Furnishing. Jingdong 'Utyalomali olucwangcisiweyo lusandula ukukhawulezisa lonke ushishino lofakelo lweShangpinzha. I-Oppein Udibanise izandla nenani lamashishini okufaka ukuvula imodeli entsha yamashishini "okufaka ngokwezifiso" ukufezekisa ukufakwa ngokudibeneyo. Intsebenziswano phakathi Zbom kunye noHushang Minghu ifuna ukwandisa ngokukhawuleza yonke imakethi yokufaka. Ngeli xesha vumela yonke imakethi yokufakelwa ibe yintando yenkunzi.
Kwimeko yokhuphiswano olushushu, kulindeleke ukuba iimeko ezahlukeneyo zeshishini zibe yinto eqhelekileyo. Njengenkampani, kubalulekile ukugcina uzinzo lophuhliso. Kubaluleke kakhulu ukuba kubaluleke kakhulu ukuqinisekisa ukuphuma okuqhubekayo phantsi kweemarike ezandayo kunye nokuma ngokuqinile ngaphambi kokuma ubude.
Ngaphambili :: Iingcebiso ezisixhenxe zokwenza iithayile zangasese zihlale ixesha elide next: Ngaba ukukhanyisa kwigumbi lakho lokuhlambela kunesitayile esaneleyo?
2021 / 09 / 25 613
2021 / 09 / 25 2193
2021 / 09 / 24 832